Ilali yaseMasía eneMountain View emangalisayo
URob ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uRob iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ikhatywe ziintaba ezinembono emangalisayo kulwandle kunye neentaba, le Masia ibonelela ngesiseko esizolileyo sosukelo lwangaphandle. Le ndawo yokuhlala inendlu enamagumbi amabini okulala, enye iphindwe kabini kwaye enye ineebhedi ezimbini zokuphumla, ikhitshi kunye namagumbi okuhlambela amabini aneshawari.
Ecaleni yingqayi apho unokonwabela amava odongwe.
Iilwandle ezinkulu kunye neelali zembali zingaphakathi kwendlela emfutshane.
Le Masia ingalala ukuya kuthi ga kwi-4 yabantu abadala, kwiintsana kukho ibhedi yokuhamba.
Iigadi, iphuli, umatshini wokuhlamba, iibhayisekile ezimbini.
Ukutya kunokubonelelwa ngumamkeli ngesicelo -ixabiso kuyathethwana
ISierra Engarceran yilali encinci enobuhlobo enebhari enye, iCarnisaria enezidingo zakho ezininzi ezisisiseko, ibhanki kunye nekhemesti. Ehlotyeni iba nomboniso wezokhenketho kunye neefiestas. Iintaba zihamba kwindawo yazo zonke izakhono, kunye nokukhwela abo banomdla ngakumbi. Ifanelekile njengesiseko sabafoti abanomdla, amagcisa kunye nabathandi bezilwanyana zasendle. Iindlela ezinemifanekiso nezicela umngeni kubakhweli beebhayisikile. Ukukhwela ihashe kufumaneka ngolungiselelo. Idama lokuqubha lelali livulwa ngoJulayi nango-Agasti.
Isithuthi sabucala siyacetyiswa. Ukuthutha ukuya nokubuya eCastellon naseValencia ngamalungiselelo angaphambili.
Kukho istudiyo somdongwe kwabo bangathanda ukuzama amava odongwe xa beceliwe.
4.76 out of 5 stars from 189 reviews
4.76 · Izimvo eziyi-189
ISierra Engarceran yilali encinci enobuhlobo eneebhara ezimbini, ibhanki kunye nekhemesti. Ehlotyeni inedama lokuqubha langaphandle, ikwabamba umboniso wokhenketho kunye nefiesta ngo-Agasti. Iintaba zihamba kuzo zonke izakhono, kunye nokukhwela abo banomdla ngakumbi kwindawo. Ifanelekile njengesiseko sabafoti abanomdla, amagcisa kunye nabathandi bezilwanyana zasendle. Iindlela ezinemifanekiso nezicela umngeni kubakhweli beebhayisikile. Ukukhwela ihashe kufumaneka ngolungiselelo. Idama lokuqubha lelali livulwa ngoJulayi nango-Agasti.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Castellon